Dabo-Gal Lagu Samaynayo Ku Dhaqanka Awaamiirta Ka Soo Baxay Guddiga Covid_19 Ee Somaliland – HCTV
Cabdiqaadir Carab 0	May 31, 2020 10:34 am
Hargeysa (HCTV) – Guddiga ka hor-tagga Xanuunka Covid_19 ee Somaliland ayaa dib u eegis ku sameeyay Qodobbo ka mid ah kuwa lagaga hor tagayo Xanuunka Covid_19.
Guddiga ayaa sheegay in daba-gal lagu samaynayo fulinta Awaamiirta ay soo saareen, si loo hubiyo in sidii la rabay loogu dhaqmay iyo in kale.
War-saxaafadeed lagu faahfaahiyey Go’aammada dib u eegista lagu sameeyay soo gaadhay HCTV ayaa u qornaa sidan:-
GO’AAMADA AY GUDDIDA COVID-19 KU SAMEEYEEN DIB U EEGIS IYO KAABIS:
Dhammaan Gaadiidka Dadweynaha noocyadiisa kala duwan; sida: basaska rakaabka, tagaasida, tikta (bajaaj) ma jiraan wax iska bedelay go’aamadii ay Guddida COVID-19 hore u soo saartay, waxana ay ahaanayaan sidoodii hore ilaa 30-ka June 2020.
Sidoo kale, dhammaanba Gaadiidka Dadweynaha noocyadiisa kala duwan waxa lagu amrayaa in ay raacaan una hoggaansamaan dhammaanba Habraacyada loogu tala galay ka Hortaga COVID-19 (sida: kala fogaanshaha, af-saabka iyo gacmo gashiga). Hab-raacyadaa iyaga ah, marka hore Guddidu way hubin doontaa, ka bacdina dabagal baa lagu samayn doonaa.
Dhammaan Masaajidada waxa lagu amrayaa in ay raacaan dhammaanba hab-raacyada loogu tala galay ka hortaga COVID-19 (sida: sijaajadaha, kala fogaabshaha, faraxalka, af-saabka iyo gacmo gashiga).
Hab-raacyadaa iyaga ah, marka hore Guddidu way hubin doontaa, ka bacdina dabagal ayaa lagu samayn doonaa. Sidoo kale, waxa xidhnaanaya Musqulaha iyo Goobaha weysada.
Waxa gebi ahaanba reeban (mamnuuc ah) isu-imaatinka iyo isu-soo-ururka bulshada nooc kasta oo uu yahayba, wax ka badan 10 qof (oo raacaya habraacyada loogu tala galay ka hortaga COVID-19, sIda: kala fogaabshaha, faraxalka, af-saabka iyo gacmo gashiga). Wixii laga maarmi waayo, waxa ogolaansho Qoraal ah laga qaadanayaa Guddida Heer Qaran ee Ka hortagga iyo maaraynta Xanuunka COVID-19.”
AKHRI: Sababta Mar Kale Dib Loogu Dhigay Shirweynaha Xisbiga KULMIYE